Unashamed Australia Recap — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Vanechitsama week ago I akabvisa kubva okurerutsa ndokunanga kune rumwe rutivi rwepasi nevamwe vangu kufarira vanhu. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, yedu Steadman rwokuparidza maneja, ini vakananga Australia kushumira Jesu.
Takapedza vhiki mbiri pasi pasi achipfuura Brisbane, Melbourne, Perth, uye Sydney. In chimwe nechimwe mumaguta takanga chikamu chikuru Concerts kubvira 5,000-10,000 Vechidiki. Pamberi Concerts, takaenda zvimwe zvikoro uye akakoka navo kunze anoratidza. Chii takabvumidzwa kutaura panguva zhinji pazvikoro aihuitira (nekuti vakanga zvikoro dzisiri dzechiKristu mamiriro), asi isu zvataigona kukurudzira vadzidzi uye kuvaratidza Kristu.
Panguva Concerts, zvose vashanu isu akadonhera dariro somunhu Rowdy, unashamed vashandi. Isu yakazununguka nzendo iwayo kusvikira panogumira mano edu apo kuedza kuva akajeka sezvinobvira nezveEvhangeri kunotikurudzira kuita zvatinoita. Kupfuura chero isu taida vabereki kuziva Jesu! Tinogara kuedza nechokwadi vabereki kusiya mwoyo, kwete dzedu unyanzvi, asi Ishe wedu.
Takasvika kupedza nguva nevatendi kubva yakasiyana nyika, ane zvakasiyana netsika, akasiyana-siyana vanoda chete naJesu zvatinoita. Mumwe mufaro kuenda kunyika dzakasiyana-siyana kuri vakayeuchidzwa hurongwa hwaMwari kuti “rudzikunuro pachake vanhu vaibva kundudzi dzose.” Mwari ari kushanda, kwete pano, asi munyika yose, kuchengetedza vabereki uye kuvashandisa kubwinya kwake.
Takadzidzawo kuti Aussies kutaura shamisa. Vanodaidza pepper “capsicum” uye vakatumidza napkins “matauro.” chii!? Vanofunga isu kutaurisa zvazvo… Zvose dudes vakanga ichazununguswa dzakaondoroka majini uye kutyaira yakawanda mota maduku. Vamwe vadzidzi vakafunga Thi'sl raiva Biggie (havana kuziva akanga afa!) uye ndakafunga kuti ndakanga Bow Wow (kwete wangu proudest nguva). Kuti kuita kuti vamwe wehondo dzedu akapa vamwe chinonaka Aussie BBQ, egwayana, huku, uye kunyange vamwe kangaruru. Zvaiva zvakanaka!
This'l vachidya vamwe BBQ Kangaroo
Nei ini Aida It
Imwe pfungwa huru nguva yangu Australia kwava zvibayo nayo nehama dzangu. Kuyanana akanga akapfuma, Ukama vakanga kwakawedzera, uye ndakanga vakwanise kudzidza vagounzwa nokuda kukurukurirana okuzvipira. Ndinogona kuyeuka kukurukura nezvomuchato akanaka, ushumiri, baba, mumhanzi, nezvimwewo. Mwari anoshandisa kukurukura sevaya neni atevere kuti mabasa akanaka uye kuti ndinyanye saIye. Ndinoonga kuti mushandirapamwe muchibata pamwe rap, DJ wacho, uye kushanya mamaneja uyo zvechokwadi vanoda Jesu.
Thank You Ndicho
Ndinoda kuti mazvita kuna shumiro vakabatsira kuti zviitike, pahondo vakaratidza kwazvo mutsa, uye vatsigiri vaiuya kuna Concerts. Kusvikira nguva inotevera, tinokudai Aussie!